Xiddiga Muslimka Ah Ee N'Golo Kante Oo Maxkamad Lasoo Taagayo & Faah-Faahinta Kiiska Lagu Haysto - Gool24.Net
Xiddiga Muslimka Ah Ee N’Golo Kante Oo Maxkamad Lasoo Taagayo & Faah-Faahinta Kiiska Lagu Haysto
June 2, 2020 Mahamoud Batalaale
Waxa soo baxaya war lama filaan noqday iyadoo ay wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in xiddiga khadka dhexe ee kooxda Chelsea ee N’Golo Kante lagu armay inuu maxkamad soo fuulo.
Sida uu sheegayo wargeyska France kasoo baxa ee L’Equipe oo ah midka xogtan baahiyay, Kante ayuu haystaa wakiilkiisii hore ee Nouari Khiari kaas oo sheegaya inuu xaq u leeyahay in lacag dhan 3.4 Milyan Pound looga qaado Kante.
Kaddib markii ay Kante iyo wakiil Nouari Khiari ku fashilmeen inay iyagu dhexdooda wax heshiis ah gaadhaan, wakiilka ayaa soo buuxiyay shuruudaha looga baahnaa taas oo dhalisay in Kante gurigiisa iyo xarunta guud ee Chelsea la geeyo warqada lagaga doonayo imaatinka maxkamada.
Wakiilka ayaa sheegaya in lacagtan sababta uu xaqa ugu leeyahay ay tahay inay ku jirtay shuruudaha heshiiskii Kante ee Chelsea iyo waliba lacag uu mudnaa markii uu Kante qandaraaska la galay shirkadda Adidas.
Kante ayay warbixintu intaas ku daraysaa inuu isku dayay inaan kiiska la gaadhsiin maxkamadda isla markaana uu ka dhuuntay wakiilkiisan hore kahor inta aan sharciga si rasmi ah loo marin.
Iyadoo ay in mudo ah soo wada shaqaynayeen Kante iyo wakiil Nouari Khiari ayay ugu dambayn sanadkii hore kala dhaqaajiyeen.
Marka laga yimaado in kiiskan loo haysto oo maxkamadda laga doonayo, Kante ayaa dhawaan kusoo laabtay tababarka shaqsi-shaqsiga ah ee kooxdiisa Chelsea walow ugu dambayn uu ka laabtay iyadoo uu wer-wer galay xaaladiisa caafimaad.
Wajiga labaad ahna in la ogol yahay in ciyaaryahanada kooxdu ay tababarka wada jir u samayn karaan ayaa dhawaan si rasmi ah loo ansixiyay.
Ugu dambayn, iyadoo ay xiddigaha Chelsea wada jir u qaadanayeen tababaradii ugu dambeeyay ayuu Kante gaar ka ahaa balse tababare Lampard ayaa rajaynaya inuu diyaar noqon doono maadaama oo xilli ciyaareedkii PL dib loo bilaabayo 17-ka June.